Movie & Music – THE NEWS TODAY
Category: Movie & Music
လရဲ့အောက်ဘက်မိုင်အဝေးမှာ ဒေါ်ခင်သန့်စင် ဇာတ်ကောင်အတွက် ထင်ကြေးပေးခံနေရတဲ့မင်းသမီးများ
လူမူကွန်ရက်မှာ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားမူများနေကြတဲ့ လရဲ့အောက်ဘက်မိုင်အဝေးမှာ ဝတ္ထုအတွက် ဇာတ်ဆောင်တွေဟာ ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ စာရေးဆရာဂျူးရဲ့ ပရိသတ်တွေ အကုန်စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။
လရဲ့အောက်ဘက်မိုင်အဝေးမှာ ဝတ္ထုဟာ စာဖတ်သူတွေရင်ထဲကို ထိရောက်စေတဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်ဖိုအကောင်းဆုံး ဝတ္ထု ဘဲဖြစ်ပါတယ်.။
သိဒ္ဓိနဲ့ ဒီပါ ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်…
သားနှစ်ယောက်ကို ကောင်းစွာ ကြပ်မတ်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့
လမ်းထိပ် ခဏသွားမို့ ဆိုပြီး ထွက်သွားတဲ့ ဆယ်တန်းကျောင်းသား ဒီပါတစ်ယောက် အိမ်ပြန်ရောက်မလာတဲ့အခါ…
ဒီပါ အိမ်ကဘာကြောင့် ထွက်သွားတာလဲ?
ရှေ့နေ နဲ့ ဘယ်လိုတွေဆုံမလဲ..?
ပုံဖော်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဝတ္ထုကောင်းလေး တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝတ္ထုအတွက် ပထမဆုံးဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ နေရောင်ခန့်နေရာမှာတော့ မင်းသားဒေါင်းက သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ရွေးချယ်ခံလိုက်ရပြီဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားဒေါင်းက ရှေ့နေ နေရောင်ခန့်ဇာတ်ကောင်နဲ့ လုံးဝလိုက်ဖက်တယ်လို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ ရင်ခုန်ကမှာကတော့ ဒီပါနဲ့သိဒ္ဒိ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မေမေဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်သန့်စင် ဆိုတဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်ဟာ ဘယ်သူနဲ့များလိုက်ဖက်မလဲဆိုတာ အပြိုင်ဆိုင် ထင်ကြေးပေးနေရပါတယ်။ နေရောင်ခန့်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ထင်ကြေးပေးခံရတဲ့သူတွေကတော့
ဟုတ်ပါတယ် အူဝဲဟာ ဒီနှစ်မှာ ရုပ်ရှင်ကားကြီးသုံးကားကို လက်ခံထားတယ်ဆိုတာသိရပြီး ပရိသတ်တွေကို အကောင်းဆုံး Character နဲ့ ချပြတော့မှာဆိုတော့ ဒီရုပ်ရှင်အတွက် အူဝဲဟာ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
အနုပညာလောကကို တဖန်ခြေလှမ်းပြီး အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကောင်တွေကိုသာတွေမြင်နိုင်မယ့် မမမိုးကလဲ ဒီ ဒေါ်ခင်သန့်စင်နေရာမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မိုးဟေကို က ပပဝတီစီရင်ခန်းရုပ်ရှင်မှာလဲပါဝင်ခဲ့ပြီး 2019 မှာ ရုံတင်သွားမှာပါ။
အမခြေရာအတိုင်း သရုပ်ဆောင်မှာလဲ မခေသူ ဖြစ်ပြီး ဒီ ဒေါ်ခင်သန့်စင် ဇာတ်ကောင်နေရာမှာဆိုရင် စိုးမြတ်နန္ဒာက သေချာပေါက် သရုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
ခုချိန်ထိ လှပနုပျိုဆဲဖြစ်ပြီး မင်းသမီးငယ်လေးတွေနဲ့အပြိုင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သလို ဒေါ်ခင်သန့်စင် အမေဇာတ်ကောင်နေရာမှာဆိုရင်လည်း လုံးဝလိုက်ဖက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
စာဖတ်ပရိသတ်တွေ သိကြမှာပါ ဒီ ဝတ္ထုမှာ ဘယ်သူက ဒေါ်ခင်သန့်စင်နေရာနဲ့ လိုက်ဖက်နေမယ်ဆိုတာကိုပေါ့
ဝတ်မှုံရွှေရည် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး -ထပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားကြပေါ့ လို့ – ပြောလိုက်တဲ့ ဒေါင်း
လက်တလော လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတာကတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသားချောလေး ဒေါင်းနဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးချော ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလဲ ဒေါင်းရဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပွက်လော ရိုက်နေပြန်ပါတယ်။
ဒေါင်း၊ကစ်နဲ့ နိုင်းနိုင်းတို့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ လိပ်ပြာစံအိမ်ဇာတ်ကားကြီးဟာ လက်တလောမှာရုံတင်နေပြီဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေက စူပါတွေချည်းဖြစ်သလိုဇာတ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ ကြည့်ရှု့အားပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ။
ဒေါင်းဟာ မကြာသေးမီကမှ တည်ကြည်အေးချမ်းတဲ့ စကားပြောဆိုဟန်လေးနဲ့ ရည်မွန်ချောမောတဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်နဲ့ ကောင်မလေးတွေအသည်းကို ညင်သာစွာခြွေချတတ်တဲ့ အိပ်မက်မင်းသားလေးအဖြစ် တမုဟုတ်ချင်းနာမည်ကြီးလာခဲ့တာဖြစ်သလို ထူးချွန်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေတခဲနက်ရရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Cele Yatkwat ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဒေါင်းက အခုလိုဖြေကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အင်တာဗျူး –ဒေါင်းနဲ့ကစ်ကို ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အပေါ်ရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ?
ဒေါင်း – ထပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားကြပေါ့ ။ ” ဆိုပြီး ပြုံးရယ်ကာ ဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုဖြေနေတုန်းမှာလဲ ကစ်က ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ ပိုလို့ မြင့်တက်လာစေပါတယ်။
အရင်တစ်ခေါက်က ကစ်နဲ့နှစ်ယောက်အတူအင်တာဗျူးတစ်ခုဖြေရာမှာလည်း တည်ငြိမ်းအေးချမ်းလွန်းတဲ့ အိနြေ္ဒရှင်လေးဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကြွေရတဲ့ဒေါင်းဟာ ကစ်ရဲ့ဘေးမှာ ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်နေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးလို ကစ်ရဲ့ဘေးမှာ ဂနာမငြိမ်ပဲ ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်နေခဲ့ပြီး အချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းနီးပါး ကစ်ကိုပဲအရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ငေးနေခဲ့တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ကစ်ဟာလည်း တစ်မျိုးလေးဖြစ်နေခဲ့ပြီး ရှက်ဝဲဝဲလေးနဲ့ ဒေါင်းရဲ့ဘေးမှာ ကလေးလေးလိုပျော်မြူးနေခဲ့ပုံဟာ ပရိသတ်တွေကို အသည်းတယားယားဖြစ်စေခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။
အခုတစ်ဖန်မကြာသေးမီကပြုလုပ်သွားတဲ့ လိပ်ပြာစံအိမ်ဇာတ်ကား အထူးပွဲမှာလည်း ဒေါင်းဟာ ကစ်ရဲ့ဘေးမှာပဲအမြဲလိုယှဉ်တွဲလိုက်ပါနေပြီး ချစ်ရည်ရွှန်းလဲ့တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ကစ်ကိုကြည့်နေလိုက်ပုံဟာ မြင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကို အသည်းတယားယားနဲ့ အခုပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုချစ်သူဖြစ်သွားစေချင်စ်ိတ်တွေတဖွားဖွားပေါ်ပေါက်စေပါတယ်။
ကစ်နဲ့ဒေါင်းက မီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အမြင်တွေနဲ့ နှစ်ယောက်ကြားက အမှတ်တရတွေကိုပြောပြသွားပါတယ်။
ကစ်က လိပ်ပြာစံအိမ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းက အမှတ်တရတွေအကြောင်း “အမှတ်တရတွေက ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ဒီကားမှာသရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကျရင် ဟာမိုနီဖြစ်အောင်တော့သရုပ်ဆောင်ရတာပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့်ကိုဒေါင်းနဲ့ ဆုံတဲ့ scenes တွေကနည်းပါတယ်။ ကိုနိုင်းနိုင်းနဲ့ဆုံတာများတယ်ပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က အိုက်တင်အပေးအယူလေး ဟာမိုနီဖြစ်အောင်တော့ မရိုက်ခင်ကတည်းက ကြိုပြီးညှိကြတာပေါ့။အဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိပါတယ်”လို့ ဖြေထားပြီး ဒေါင်းက ထုံးစံအတိုင်းကစ်ဆီကနေ အကြည့်တွေမခွာပဲ ငေးစိုက်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒေါင်းကတော့ အမှတ်တရတွေထဲကမှ သူမှတ်မိနေတာလေးကို “အမှတ်တရကတော့ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်တော့ (မကစ်ကိုငေးရင်း) သူခံရတာတစ်ခုပဲ။ နောက်ဆုံးခန်းမှာ သူဝုန်းခနဲဖြစ်သွားတာ။ တော်တော်နာမှာ။ တကယ်လုပ်ရတာဆိုတော့လေ”လို့ ကြင်နာစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ဟန်လေးနဲ့ပြောထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကစ်က ဒေါင်းရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အမြင်ကို “ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို အပိုအလိုမရှိပေ့ါနော်။ အကောင်းဆုံး၊ဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံး movie လည်းဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ လုံးဝစိမ်းတာတွေဘာတွေလည်းမရှိဘူး။
ကာရိုက်တာကို အပိုအလိုမရှိသရုပ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့ ကစ်မြင်ပါတယ်”လို့ ဖြေကြားထားပြီး ဒေါင်းကတော့ ကစ်ကို ရင်ခုန်ကြည်နူးနေဟန်နဲ့ငေးနေပြီးမှ ကစ်ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အမြင်ကို “ကျွန်တော်ကတော့ တကယ့်အမေတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်၊အဲဒါကို အပြည့်အဝမြင်ရတာကို လေးစားပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကစ်ကစ်ဆိုတဲ့ကာရိုက်တာပျောက်သွားပြီးတော့ အမေဆိုတဲ့ကာရိုက်တာထဲမှာလုံးဝ တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း၊ 100% ဝင်နေရတာကို ကြည့်ကြည့်ပါ ကျွန်တော်ပြောတာထက်ပိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်”လို့ ဝေဖန်ချက်ပေးထားပါတယ်။ ။